March 5, 2020 - CeleLove
ဖတ်သွားသူတိုင်း သန်းပေါင်းများစွာသော လူများထက် ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဖတ်သွားသူတိုင်း သိသွားပါပြီ…
ဖတ်သွားသူတိုင်း သန်းပေါင်းများစွာသော လူများထက် ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဖတ်သွားသူတိုင်း သိသွားပါပြီ… ကံထူးရှင်တိုင်း ဖတ်ခွင့်ရမည် …. ။ ဖတ်သွား ရှဲသွားသူတိုင်း ကမ္ဘာမှာ သန်းပေါင်းများစွာသော လူများထက် ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဖတ်သွားသူတိုင်း သိသွားပါပြီ..။ သင့်​ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ စားစရာရှိနေတယ် …. ။ […]
ဒီကလေးက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အမှောင်ဖုံးနေတဲ့အမှားတွေကြောင့်သာ လောကကြီးထဲရောက်ခဲ့ရတာပါ
ဒီကလေးက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အမှောင်ဖုံးနေတဲ့အမှားတွေကြောင့်သာ လောကကြီးထဲရောက်ခဲ့ရတာပါ ဒီမွေးကာစလူမမယ်လေးမှာ ဘာများအပြစ်ရှိလို့လဲ တကယ်တမ်းအပြစ်ရှိသင့်တာက ခင်ဗျားတို့ဗျ …. ဒီကလေးက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အမှောင်ဖုံးနေတဲ့အမှားတွေကြောင့်သာ လောကကြီးထဲရောက်ခဲ့ရတာပါ …. ခုတော့ ခင်ဗျားတိုရဲ့ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် လောကရဲ့အလင်းရောင်ကိုတောင်မမြင်လိုက်ရဘဲ လောကထဲက ပြန်ထွက်ခွါသွားရပြန်ပြီ ….. ခင်ဗျားတို့အရမ်းရက်စက်တယ်ဗျာ ဘယ်လိုအယူအဆမျိုးနဲ့ပဲကြည့်ကြည့် လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းခက်ခဲပါတယ် […]
ဂရုစိုက်တဲ့လူကို မင်းပစ်ပယ်တဲ့အခါ ဥပေက္ခာပြုတဲ့သူနဲ့ မင်းမုချ တွေ့ရလိမ့်မယ်
ဂရုစိုက်တဲ့လူကို မင်းပစ်ပယ်တဲ့အခါ ဥပေက္ခာပြုတဲ့သူနဲ့ မင်းမုချ တွေ့ရလိမ့်မယ် ဝဋ်လည်ခြင်း ဆုလာဒ်… – ဂရုစိုက်တဲ့လူကို မင်းပစ်ပယ်တဲ့အခါ…… ဥပေက္ခာပြုတဲ့သူနဲ့ မင်း တွေ့ရလိမ့်မယ် ။ – သည်းခံပေးမှန်း မင်းသိရက်နဲ့ အနိုင်ယူတဲ့အခါ …… သည်းမခံနိုင်တဲ့သူက မင်းကို ပြန်စော်ကားလိမ့်မယ် ။ – သဝန်တိုတတ်သူကို […]